चमत्कारी हुने गर्दछ यो विरुवा, घरको यो दिशामा लगाउनु धनको कमि कहियै हुदैन – Sapana Sanjal
April 23, 2021 199
आजको समयमा मानिसलाई लगातार आवश्यकता बढ्नै जाने गरेका छन्। एक व्यक्तिको आवश्यकताको कुनै सिमा हुँदैन्। यो अवस्थामा सबैको चाहना अधिक धन कमाउनुको हुने गर्दछ।
अहिलेको समयमा मानिस् आफ्ना असिमित चाहना हुरा गर्ने सपना बनाउने गर्दछन्। हर कोहीको चाहना हुन्छ, आफ्नै घर, बैँक ब्यालेन्स, गाडी तथा परिवारसँग सुखमय जीवन विताउने। आज हामी तपाईलाई यस्तो चमत्कारी विरुवाका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जसको सहयोगमा तपाई आर्थिक समस्या हटाउन सक्नुहुनेछ।
सबैले आफ्नो घरको सुन्दरता बढाउनका लागि कयौँ विरुवा लगाउने गर्दछन्। यदी तपाई यी विरुवाका साथ उक्त चमत्कारी विरुवा लगाउनु भयो भने त्यसले धन चुम्बकको जसरी तपाईको घरतिर तान्ने गर्दछ। यस विरुवाको नाम क्रासुला हो। यस विरुवाले तपाईलाई धनवान बनाउने गर्दछ।
कस्तो हुन्छ बनावटः क्रासुला नामको यो विरुवाको पात चौडा आकारको हुने गर्दछ। जुन निकै नरम हुने गर्दछ। यस विरुवाको हात लगाउँदा ओइलाउने, घुम्चिने, पहेँलो हुने हुँदैन्।
सजिलै घरमा राख्न सकिन्छः यस विरुवाको हेरचाह गर्न निकै सजिलो हुने गर्दछ। क्रासुला घरभित्र छायामा पनि बढ्ने गर्दछ। यसले धेरै भाग ओगट्ने भएकाले यसलाई गमलामा लगाउनु राम्रो मानिन्छ।
कहाँ लगाउने : वास्तुशास्त्रका अनुसार यस विरुवालाई घरको मु,ख्य ढोकाको अगाडि लगाउनुहोस्। यस विरुवाले घरमा धन भित्र्याउने भएकाले यसलाई दाहिने पारेर राख्ने गर्नुहोस्। यदी तपाईको यसलाई यसरी राख्नुभयो भने केही समयमै यसको असर देखिन सुरु हुने गर्दछ।
Prevयो यस्तो अनौठो ठाउँ जहाँ ६–७ वर्षको उमेरमा सहवासका लागि तालिम दिईन्छ
Nextचमत्कारी हुने गर्दछ यो विरुवा, घरको यो दिशामा लगाउनु धनको कमि कहियै हुदैन
शक्तिशाली चक्रवात ताउकतेका कारण भोलिदेखि मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिनापानी आउंदै
के तपाईले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनु भयो? त्यसो भए के यो सम्भब छ ? खोपले शरीरमा चुम्बकीय शक्ति विकास गर्ने दाबी